कोरोनाले लथालिङ्ग पारेको इटालियन फुटबल – Talking Sports
अनुहारमा मास्क, हातमा पञ्जा र उच्च सतर्कताको साथ समर्थकहरुबीच बर्सिलोनाले इटालियन शहर नेपल्समा च्यम्पियनस लिगको अन्तिम १६ को खेल खेल्यो । खाली कुर्सी, सुनशान रंगशाला र हुटिङ्ग गरिएको आवाजको प्रतिध्वनि समेत सुनिने मैदानमा भएको खेललाई धेरैले नियाले तर के इटालीमा फुटबल यसरी नै चल्ने खेल हो ? कोरोनाको त्रासले धेरै क्लबहरु खेल पनि सार्न बाध्य भएका छन् ।
लियोनल मेस्सी पहिलो पटक मंगलबार नेपल्समा देखा परेका थिए । बार्सिलोनालले च्याम्पियन्स लिगमा नापोलीसँग १–१ को बराबरी गरेको खेलमा मेस्सी जम्न नसके पनि उनको उपस्थितीले नेपल्समा खुशीयालीको माहौल थियो । तर दुखको कुरा उनकै देशका क्लब लिजेण्ड बनेको डिएगो माराडोना स्टेडियममा कोरोना भाइरस बिरूद्ध सावधानी अपनाउँदै मास्क लगाएर खेल हेरिरहेका थिए ।
कारण थियो कोभिड – १९, पुरै संसारमा सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरस । इटालीमा कोरोना संक्रमित ३ सय मध्ये १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यही त्रासका कारण भेनिस कार्निवाल पनि रद्द गरिएको छ भने ला स्काला थिएटर बन्द गरिएको छ । मिलानको स्टक एक्सचेन्ज ओरालो लाग्न थालिसकेको छ । यसले इटालियन फुटबल र सामान्यतया खेल क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ ।
पछिल्लो साताको अन्त्यमा, मिलान, बर्गामो, भेरोना र टुरिनमा चार सिरा आ का खेलहरू निलम्बन गरिएको थियो । शनिबार, सिरि बी टोली क्रेमोनसलाई ३०० माईलको दूरीमा रहेको एस्कोली शहरमा गाडीबाट यात्रा गर्नु परेको थियो, त्यो पनि घर पठाउन ।
यो हप्ता सुरक्षा उपायहरू अझ बढी अपनाइएको छ । इटालियन सरकारले ६ वटा क्षेत्रहरूमा लागू गरेको नयाँ आदेश अनुसार सिरी आ का सबै खेलहरूमा दर्शकलाई प्रवेश बन्द गरिएको छ । तेस्रो श्रेणीका फुटबल खेलहरु रद्द गरिएको छ भने रग्बी, भलिबल र बास्केटबल लिगहरू पनि बन्द गर्ने आदेश इटालियन सरकारले दिएको छ ।
फुटबल म्याचलाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधिको रूपमा हेर्ने गरेका फ्यानहरु भ्ने आपसी सहमतिमै खेलहरूमा जान जारी राख्ने बताउछन् । उनीहरूलाई यो सुरक्षाको चिन्ताले धेरैले मास्क लगाएरै खेल हेर्ने जनाउछन् ।
“हामी बिहीबार राति कोरोना भाइरसको प्रभाव फुटबलमा देख्नेछौं जब इन्टर मिलनले युरोपा लिगमा लुडोग्रेट्सलाई दर्शकका लागि बन्द सान सिरोमा खेल्नेछ,” एक इन्टर समर्थक भन्छन् । बुल्गेरियाली टोलीमा पनि कोरोनाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । लुडोग्रेट्स खेलाडीहरू यस हप्ता मिलानमा आफ्नो बसबाट मास्क र प्लास्टिकका पन्जा लगाएरा प्रशिक्षण स्थल पुगेका थिए ।
इटाली यात्राको लागि क्लबले ‘इम्युनोलोजिस्ट’ लाई पनि आफुसँगै लिएर गएको छ । उनीहरूका खेलाडीले विपक्षीसँग हात नमिलाउने पो हो की कि भनेर प्रश्न उठेको छ । यो व्यावहारिक छ की अलि टाढा नै जाँदै छ ? तर कोरोनाको त्रास भने अझै पनि कायम नै रहेको छ ।
दुबै इन्टर र एसी मिलानले आफ्नो कार्यालयहरू बन्द गरिसकेका छन् भने कर्मचारीहरू घरबाटै काम गर्दैछन् । मिलान शहरमा भुमिगत प्रणालीमा काम भइरहेको छ । चोक र गल्ली शान्त र मानविहीन बनिसकेका छन् । बन्द ढोकामा खेल्दा टिकट बिक्री नहुने भएपछि केही टोलीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले क्लबको अर्थतन्त्रलाई निकै प्रभाव पार्ने निश्चित नै छ ।
“क्लबले खेल निलम्बन गर्न सक्थ्यो र उनीहरुलाई स्थगित पनि गर्न सक्थ्यो तर कार्यक्रमको तालिकामा समस्या आएको छ,” इटालीका खेलकुद मन्त्री भिन्सेन्जो स्पडाफोराले भने। दुर्भाग्यवस, यो मैले मुल्यांकन गर्न वा निर्णय गर्न सक्ने केहि पनि छैन ।
टिकट खरीद नगर्ने हो भने फ्यानहरुको के हुन्छ वा क्लबहरू यसका लागि उनीहरूका आफ्नै नियम अनुसार काम गर्छन् त्यो खेल हुने दिनमै थाहा हुनेछ । इन्टरले युरोपा लिग खेलको लागि किनेको टिकट फिर्ता गर्नेछ, तर युभेन्टसले कुनै टिकट फिर्ता नगर्ने जनाएको छ । ‘सीजन टिकट होल्डर’ हरु पनि डर्र्बी डि इटालियाको लागि बियानकोनेरी बिरूद्ध आइतबार राति एउटा खाली स्टेडियममा हुने हुँदा त्यहा जान पाउने छैनन् ।
इन्टरले गत आइतबार साम्प्डोरिया बिरूद्धको खेल खेलेको थिएन । यदि एन्टोनियो कोन्टेको टोली कोपा इटालिया र यूरोपा लिग फाइनलमा जान्छ भने समर्थकको लागि क्लबले २० मे देखि मात्र प्रकृया अगाडी बढाउनेछ, अन्तिम सिरी आ खेलको चार दिन अघि ।
उनीहरूको कोपा इटालिया सेमीफाइनल दोस्रो चरणमा नापोली बिरूद्ध स्थगित गर्ने बिकल्पले पनि फाइनल पुन नयाँ मिति तय गरिनेछ । कोरोनाले गर्दा इटालियन फुटबल लथालिङ्ग भएको छ । बिस्तारै फैलिदै गरेको कोरोनाले अब विश्व फुटबललाई नै असर पार्ने त होइन ?
खराब ‘बडी ल्याङ्गवेज’ भएको नेपाललाई झिनो आशा